Alstom Vakfı Dünya Çapında 25 Yeni Projeyi Destekleyecek | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ33 ပြင်သစ်ကမ္ဘာတဝှမ်း 25 စီမံကိန်းအသစ်ကိုထောက်ပံ့ရန် Alstom Foundation
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 ပြင်သစ်, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီမံကိန်းအသစ်များကိုထောက်ပံ့ရန် alstom အခြေခံအုတ်မြစ်
Alstom ဖောင်ဒေးရှင်းမှ 2019 ကာလအတွက်တင်သွင်းသောစီမံကိန်းများ၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း 158 စီမံကိန်းကိုတင်ပြပြီးသောအခါ Alstom မှ ၀ န်ထမ်းများသည်၎င်းတို့၏လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များကိုထပ်မံပေးအပ်ခဲ့သည်။
သည် "bidown လွတ်လပ်သောနေထိုင်မှုနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအကယ်ဒမီ" မှ Alstom ဖောင်ဒေးရှင်းအစ္စတန်ဘူလ် / တူရကီ, စီမံကိန်းကိုရွေးပါ။
“ BiDown လွတ်လပ်သောဘဝနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအကယ်ဒမီ” သည်ဒေါင်းန်ဆင်ဒရုန်းဖြစ်နေသည့်လူငယ်များအတွက်ပညာရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်စီးပွားရေးစွမ်းရည်များရှိရန်အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ ဤစီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူကြီးများအားနေ့စဉ်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးလူကြီးများကိုအကျိုးပြုသည့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအစီအစဉ်များကဲ့သို့သောနေ့စဉ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ ၀ များတွင်လိုအပ်သောစွမ်းရည်များကိုသင်ကြားရန်ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
Alstom တူရကီမှ General Manager Arban Çitak "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ Alstom Foundation ကရွေးချယ်ထားသည့်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကော်ပိုရိတ်လူမှုတာ ၀ န်ယူမှု (CSR) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဘဝ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရပ်ရွာလူထုကိုထောက်ပံ့ရန်ဒေသခံမိတ်ဖက်များနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
Alstom မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သူတို့၏နိုင်ငံသားခံယူချက်ကိုအလွန်ပြင်းပြစွာပြသခြင်းကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာမိပါသည် Alstom ဖောင်ဒေးရှင်း၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Barry Howe ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကိုထောက်ပံ့ရန်ကတိသစ္စာပြုထားပြီး Alstom သည်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေအတွက်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောင်ဒေးရှင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းက 50% ကျော်တိုးလာပြီးယူရိုဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ရှိလိမ့်မည်။ ဒီနည်းအားဖြင့်ဘတ်ဂျက်ပိုများလာရင် (သို့) ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ”
ယခုနှစ်တွင်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် 2019 / 20 ဘတ်ဂျက်ကိုထောက်ပံ့ရန် 25 စီမံကိန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထောက်ပံ့ခဲ့သော 16 စီမံကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတိုးလာသည်။
2007 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Alstom ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ဒေသခံ NGO များနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အဆောက်အအုံများနှင့်စီမံကိန်းနေရာများသည်ကမ္ဘာအနှံ့တည်ရှိပြီး Alstom ၀ န်ထမ်းများအဆိုပြုထားသောစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောင်ဒေးရှင်း၏စီမံကိန်းများသည်ရွေ့လျားခြင်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ စွမ်းအင်နှင့်ရေနှင့်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္: လေးရပ်ကိုအဓိကထားသည်။
Altepe: တူရကီအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Silkworm ကျနော်တို့ကိုပြသလိမ့်မယ် 07 / 12 / 2013 Altepe: İpekböceği ile dünya çapında Türk markası olabileceğini gösterdik .Bursa büyükşehir belediye Başkanı Recep Altepe, yerli tramvay İpekböceği ile dünya standartlarında bir Türk markası üretilebileceğini uygulayarak gösterdiklerini söyledi Bursa büyükşehir…
ေူပာင်းလဲရေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအင်ဂျင်နီယာအောင်မြင်မှုအတွက်ပွင့်လင်းခေတ်ဥရောပအာရှစီမံကိန်း 07 / 11 / 2015 Avrasya Geçişi Projesi tünelcilikte çağ açan Dünya çapında mühendislik başarısı :Avrasya Geçişi Projesi’ne (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) katkı sağlayan aile bireylerine özel bir kutlama gerçekleştirildi. Asya ve Avrupa kıtalarını…
နှစ်ဦးကိုဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းနှင့် Marmaray ကမ္ဘာတစ်ဝန်း 31 / 01 / 2012 Avrasya Tüneli ve Marmaray : Marmara Denizi’nin altında iki kıtayı birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi için ilk kazma darbesi önümüzdeki birkaç ay içerisinde vurulacak. Projenin bitmesiyle birlikte yaklaşık 100…
ကမ္ဘာကြီးကိုအကျပ်အတည်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့ကျနော်တို့ဘဝမှကြီးမားသောပရောဂျက်ကိုဖြုန်း 10 / 03 / 2015 Dünya krizle boğuşurken, dev projeyi hayata geçiriyoruz :Tüm dünya ekonomik bir kriz ile uğraşırken 3,5 milyar dolarlık dev projeyi hayata geçiriyoruz” diyen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun 2020’de hizmete girecek olan…
TCDD ဖောင်ဒေးရှင်းမှနယူးစီမံခန့်ခွဲမှုပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးစတင် 09 / 04 / 2016 TCDD Vakfı Yeni Yönetimi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi : TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın yeni Yönetim Kurulu toplandı. Vakıf Mütevelli Heyeti’ nin Olağan Mütevelli Heyet Bilanço…
နှစ်ဦးကိုဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းနှင့် Marmaray ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
သြစတြီးယား Gaziantep ကောလိပ် Foundation မှ High School တွင်ဆောင်းရာသီစခန်း
Transit ပထမဦးစွာအပြတ်အသတ်အမြတ်အတွက် Tonya-Vakfıkebirလမ်းမကြီး '' လေဖြတ်ပြီးနောက်
နည်းပြအဆိုပါလမ်းရထား Konya ၌ရှိ၏ capis
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ:2Mononlok ခန္ဓာကိုယ်ကလောင်အတွင်းပိုင်းအချင်းထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း (TÜLOMSAŞ)